सञ्चालनको पहिलो वर्षनै बोर्डमा पर्न सफल भयौ : शिशिर उप्रेती ( प्रिन्सिपल एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेज ) – Education Rays
Home / Interview / सञ्चालनको पहिलो वर्षनै बोर्डमा पर्न सफल भयौ : शिशिर उप्रेती ( प्रिन्सिपल एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेज )
सञ्चालनको पहिलो वर्षनै बोर्डमा पर्न सफल भयौ : शिशिर उप्रेती ( प्रिन्सिपल एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेज )
July 28, 2015	Interview Leaveacomment
एजुकेसन रे ः एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेजको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न?
शिशिर उप्रेती ः २०६९ सालमा मानविकी, व्यवस्थापन, विज्ञान संकाय पढाइ हुने काठमाडौं उपत्यकाका दशभन्दा बढी उत्कृष्ट कलेजभित्रका पनि उत्कृष्ट शिक्षक र व्यवस्थापकहरुको सहकार्यमा यस कलेजको स्थापना भएको हो ।
एजुकेसन रे ः यसको नामाकरण गर्नुको पछाडीका कारणहरु के हुन् ?
शिशिर उप्रेती ः सुरुमा यसको स्थापना गर्दा फ्लोरिडा उच्च मा.वि. नामाकरण गरेका थियौं । फ्लोरिड भनेको पूmलको एक किसिम हो । भर्खर विद्यालय तहको अध्ययन सकेर उच्च मा.वि.मा पढ्न आउने विद्यार्थीहरु एक किसिमले फुल नै हुन् । विभिन्न रंगका, विभिन्न किसिमका, विभिन्न सुगन्धका पूmलहरुको फुलबारीको रुपमा यस संस्थालाई उत्कृष्ट बगैंचा बनाउने उद्देश्यका साथ यसको नामाकरण गरिएको हो । पछि यसलाई अमेरिकाको फ्लोरिडा सहरको रुपमा बुझियो । जसले अंग्रेजी नामाकरण भएको अर्थ लाग्न गयो । त्यसकारण पनि विश्वकै अग्लो शिखर भएको नेपालको सुन्दर पूmलबारी भन्ने अर्थमा एभरेष्ट फ्लोरिडा नामाकरण गरिएको हो ।
एजुकेसन रे ः यस कलेजमै विद्यार्थीहरु किन आउने ?
शिशिर उप्रेती ः पहिलो कुरा त कलेज गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छ । यो यस कलेजको विशेषता पनि हो । यसको प्रमाणको रुपमा पहिलो समूह परिणामलाई हेर्न सक्नुहुन्छ । पहिलो समूहमा २ जना विद्यार्थीको ८९.८८ प्रतिशतका साथ नेपालभरिका उत्कृष्ट १० मध्ये ५ जना यसै कलेजका पर्नु हो । ८० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी विशिष्ट श्रेणी सहित प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुन सफल भएका छन् ।
एजुकेसन रे ः अन्य विशेषताहरु के के हुन् ?
शिशिर उप्रेती ः अन्य विशेषताहरुमा हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विज्ञान (केमेष्ट्री, फिजिक्स, बायोलोजी तीन वटै विभागका) प्रयोगशाला, १०० भन्दा बढी कम्प्युटर रहेको कम्प्युटर प्रयोगशाला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पुस्तकालय, आफ्नै जमिन र भवन भएकाले कलेजको स्थायी संरचना हाम्रा विशेषता हुन् । साथै काठमाडौं उपत्यकाका विज्ञान, मानवीकि, व्यवस्थापन संकायका उत्कृष्ट शिक्षकहरु आफैं लगानीकर्ता पनि भएकाले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न कुनै कन्जुसी नगरिनु समेत हाम्रो महत्वपूर्ण विशेषता हो । त्यसैगरी यस कलेजको गुणस्तरीयताको अनुपातमा शुल्क पनि न्यून रहनु पनि हाम्रो विशेषता नै हो ।
एजुकेसन रे ः यस कलेजमा कुन कुन संकायको अध्यापन गरिन्छ ?
शिशिर उप्रेती ः सुरुमा त विज्ञान, व्यवस्थापन र मानवीकि तीन वटै संकायको अध्यापन गर्ने गर्दथ्यौं । तर हाल आएर मानवीकितर्फ विद्यार्थी कम भर्ना हुने भएकाले यस वर्षदेखि विज्ञान र व्यवस्थापन मात्र अध्यापन गर्ने योजना बनाएका छौं ।
एजुकेसन रे ः व्यवस्थापन संकायमा कुन कुन विषयहरु छन् ?
शिशिर उप्रेती ः व्यवस्थापन संकायमा कम्प्युटर विज्ञान, होटल व्यवस्थापन र विजनेस स्टडिज विषयहरुमा हामी भर्ना लिन्छौं । विज्ञान तर्फ बायोलोजी र फिजिक्स विषयहरु अध्यापन गरिन्छ । साथै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई कलेजमै इन्जिनियरिङ्ग र मेडिकल क्षेत्रको प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा पनि संचालन गर्ने गर्दछौं ।
एजुकेसन रे ःकाठमाडौं उपत्यका र विशेष गरी कलेज रहेको बानेश्वर क्षेत्रमै पनि कयौं शैक्षिक संस्थाहरु छन् र ती मध्ये यो कलेज कुन अर्थमा फरक छ ?
शिशिर उप्रेती ः भर्खर स्थापनाको ३ वर्ष लागेकाले हामी आफैं फरक दावी त गर्दैनौं । तर हाम्रा विद्यार्थीहरुको नतिजा, शिक्षकहरुको क्रियाशीलताका आधारमा कलेज फरक छ भन्ने अभिभावकहरु टिप्पणी गर्ने गर्नुभएको छ । साथै कलेजको अर्को पहिचान भनेको अनुशासित वातावरण पनि हो । यहाँका शिक्षक, कर्मचारीहरु आफुपनि अनुशासनमा बस्छन् जसले विद्यार्थीहरुलाई पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा प्रदान गर्दछ ।
एजुकेसन रे ः पैसा नहुने तर राम्रो विषय अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीका लागि के के सुविधा छन् त यस कलेजमा ?
शिशिर उप्रेती ः पहिलो कुरा त यस कलेजमा मध्यमस्तरको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । विज्ञान संकायमा वर्षको पचास हजार र व्यवस्थापनमा ३५ देखि ४० हजारसम्मको शुल्कमा गुणस्तरीय पढाइ हुने कलेज हाम्रो नै हो भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । त्यसले पनि यस कलेजमा शिक्षा महँगो छैन भन्ने हाम्रो दावी हो । त्यसका साथै हिसान र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सिफारिसमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति बाहेक अन्य ३५ देखि ४० जनालाई कलेजकै तर्फबाट छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेका छौं ।
एजुकेसन रे ः अन्त्यमा एजुकेसन रे मार्फत विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई कुनै सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
शिशिर उप्रेती ः विद्यालय तह पार गरेर उच्च शिक्षा लिन तयार विदार्थीहरुले जुनसुनै संस्था छानेपनि नतिजा, अनुशासित वातावरण, शिक्षकहरुको योग्यता, भौतिक पूर्वाधारलाई विचार गर्नुभयो भने पछि पश्चाताप गर्नु पर्दैन । यदि माथि भनिएका विशेषताहरुलाई परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ भने एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेजको ढोका हरदम खुला छ । अभिभावकको कसैटीमा कलेज खरो उत्रिन्छ भन्नेमा हामी दृढविश्वस्त छौं ।
Nepalese are impressive and rich in their hearts: Sebatien Shanty ( Chairman, Garuda Home For Children France)
Pushpalal Memorial Multiple College, Chabahil is the college of people: Shambhu Adhikari ( Campus Chief,Pushpalal Memorial Multiple College, Chabahil)
Nepal and Italy have many similarities: Maussemo Rosseto , Chairman ( Friuli Mandi Nepal Namaste Italy)
I want to help my homeland by transferring new knowledge, ideas, and technologies: Dr Ram Chandra Bhujel(Director,Aqua-Centre at AIT Thailand)
Dr Ram Chandra Bhujel Dr Ram Chandra Bhujel was invited asakey resource person …
Admission call for Master and Bachelor Programs, 2017 August Session, School of Education, Hattiban, Lalitpur
Consultant in International Relations and Foreign Policy, Tbilisi, GEORGIA
National consultant for Project Mid-Term Review, Beijing, CHINA
Indian Embassy Scholarships for MBBS, BE, B.Pharma, B.Sc Ag. B.Sc DT, and B.Sc Nursing
KUSOM invites applications for Kathmandu University Undergraduate Management Test (KUUMAT)
Designed by Abritti Media